VIDEO တွေ သံစဉ်တွေကို REMIX လုပ်နိုင်မယ့် PCDJ DEX V2.6.5 + CRACK - .::just for share::.
Home » DJ Remix » VIDEO တွေ သံစဉ်တွေကို REMIX လုပ်နိုင်မယ့် PCDJ DEX V2.6.5 + CRACK
VIDEO တွေ သံစဉ်တွေကို REMIX လုပ်နိုင်မယ့် PCDJ DEX V2.6.5 + CRACK
Video တွေ သီချင်းတွေသံစဉ်တွေကို Remix လုပ်ချင်သူများအတွက် PCDJ DEX ဆိုတဲ့ Software လေးတစ် ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ခတ်လူငယ်တွေအတွက် DJ Remix တွေဖန်တီးယူနိုင်တဲ့ Software တစ်ခုဆို လည်းမမှားပါဘူး။ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာကတော့ ၀ါသနာရှင်တွေအတွက်ပါ။ Professional တွေအ တွက်ကတော့ File Size ကြီးလွန်းလို့မတင်ပေးနိုင်သေးပါဘူးဗျာ။ ဒီကောင်လေးကလည်း ၀ါသနာရှင်ဆိုပေး မယ့် အထင်တော့မသေးလိုက်နဲ့နော်။ သူ့ရဲ့ Feature တွေကိုသေချာလေ့လာကြည့်ပြီးသွားပါပြီ။ လုပ်ဆောင်ချက်တွေစုံလင်တဲ့အပြင် Support လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ File Size တွေကလည်းစုံလင်ပါတယ်။ အမြဲ တမ်းသုံးနိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Crack ကိုပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
- Skin support ? change the appearance of DEX 2
- Analog input for microphone (with talk over),turntables, or CD player?s
- Sample player ? load up audio clips and trigger them
- Key-Lock (Master Tempo) ? Very high quality option available!